Waxaynu wada ognahay in aan furi kartaa dariishadaha badan waqti isku mid ah kombiyuutarka iyo mid ka mid ah noqon doona ka hor sida uu furmo suuqa weyn ee qalliin. Sidaa daraaddeed ayaa dadku is haddii ay jiraan wax yaabahan in telefoonada Android iyo kiniiniyada sida. Jawaabtu waa haa.
Qeybta 1: talaabooyin lagu xalinayo dhibaatadaa Multi-furmo suuqa la Samsung ee Android 4.3 Qeybta 2: Top 5 Manager Android Window Apps Qeybta 3: Maareeyaha Android Window VS Android Manager Windows Qeybta 4: Maareeyaha Desktop Android Windows in Maamul Manager Window App u Android
Qeybta 1: talaabooyin lagu xalinayo dhibaatadaa Multi-furmo suuqa la Samsung ee Android 4.3
Samsung ayaa habkaani la taleefannadooda. Sida nidaamka qalliinka Android updated in 4.3 version, muujinta ah uu furmo suuqa kala duwan lahaa silco, gaar ahaan qalabka Samsung Galaxy sida SIII. Waxa ay u muuqataa in feature multi-suuqa kala lumay functionalities ay. Sidaas oo ay tahayna, waxaa xal ah in ay heli doonaan feature aad jeceshahay shaqeeyay waqti.
Step1: Tag Settings - My Device - Home Screen Mode , dooro Mode Easy ka dibna Codso
Talaabada 2: dib u gala Settings - My Device - Home Screen Mode , dooro Standard Mode ka dibna codso .
Tallaabo 3: U tag Settings - My Device - Display iyo awood uu furmo suuqa kala duwan adigoo sax ku calaamadaynaya sanduuqa ku xiga in doorashadan. Marka sanduuqa waxaa laga hab Doorashadan waa karti. Haddaba haddii aad saxaafadeed dheer furaha dib u keenaan guddi ka furmo suuqa kala duwan.
Qeybta 2: Top 5 Android Window Manager Apps
Tababaraha suuqa kala Android waa adeeg nidaam, taas oo mas'uul ka ah maaraynta daaqadaha badan. Waxay go'aan ka daaqadaha waa la arki karo, iyo sida ay u taagan shaashadda. Waxaa kale ee uu qabtaa kala guurka uu furmo suuqa iyo animations markii furitaanka ama ku dhow app ama qoqobada shaashadda. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah maamulayaasha suuqa kala Android:
Window Multi 4.2 / 5 Free
Tababare Android Windows 4.0 / 5 Free
Multiwindow Launcher 4.1 / 5 Free
Tababare Window Multi (Phone) 4.1 / 5 Free
Screen Multi 3.1 / 5 Free
Iyadoo tababaraha Window Multi u Android, dadka isticmaala ku dari kartaa Chine ay jecel yihiin in ay galeeysid oo fur mar kasta oo ay doonayaan. Feature ugu fiican waa in aadan u baahan inaad ka rujin qalabka aad si ay u isticmaalaan app this. Waxaa jira 6 mawduucyada horyalka Talyaaniga oo ay la socdaan app iyo aad doorato midka aad jeceshahay karo. Iyo haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo app this, waxaa waa edbinta ah inaan idin baro.
2. Maareeyaha Android Windows
Tani waa codsi ugu fiican ee kuwa idinka mid ah oo waa garabaka kombiyuutarada socda nidaamka ka hawlgala Windows. Tababare Android Windows asal ahaan waa tababare file ah, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u maareeyaan files ee daaqadaha badan. App Tani waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan qalabka waaweyn-screen sidaa darteed haddii aad telefoon ma laha screen badan oo aad u badan tahay in ay la kulmaan dhibaato. Waxaad isku shaandheyn karaa daaqadaha furay sida waxa aad la leedahay PC.
Download Manager Android Windows ka Google Play Store >>
Multiwindow Launcher waa tababare kale oo uu furmo suuqa lacag la'aan ah. Waa wax la mid ah in aad ka arki kartaa kombiyuutarka Mac ah, ku haysta xadhig laga barnaamijyadooda. Oo waxaad ku dari kartaa barnaamijyadooda aad jeceshahay iyo biiro mid ka mid app in kale. Dadka qaar ma jeclaan laga yaabaa in line meel tan iyo markii laga yaabaa in aad si qalad ah u tab iyo tagaan si ay barnaamijyadooda kale. Haddii aadan jeclaan xayeysiis, aad leedahay si ay kor si version pro qaar ka mid ah lacagta.
Download Multiwindow Launcher ka Google Play Store >>
4. Maamulaha Window Multi (Phone)
App Taas ayaa ka dhigaysa oo dhan Apps multi-suuqa kala awood, laakiin ku darayaa kuwa aad ku darto saxaarad furitaanka oo keliya. Waxaa loola jeedaa in aad jiidi karaan app ka bar ah la bilaabay iyo dhibic si ay app kasta. Markaas, waxaa lagu daahfuri doonaa in screen kala. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u leedahay in rujin aad telefoon si aad u isticmaasho.
Download Manager Window Multi (Phone) ka Google Play Store >>
5. Screen Multi
Screen Multi waa ka sii wanaagsan in loogu yeedho Tababaraha kala daaqad. Users laba screens waqti isku mid ah kartaan. Waa app wanaagsan oo online ka eegay qalabka Android aad. Waxaad mid ka mid webpage iyo bogga kale ka akhrisan kartaa waqti isku mid ah ama akhri hal bog, qaado qoraal yar. Oo qaar ka mid ah sawir caashaqi jiray, ay is barbardhigi kartaa mid ba midka kale. Iyo app this sidoo kale taageertaa Iyada oo tirada uu furmo. Xididse isagu ma leh ayaa loo baahan yahay iyo weliba.
Qeybta 3: Maareeyaha Windows Android VS Manager Android Window
Waa maxay kala duwan yihiin?
Daaqadaha Android managar muuqataa dhow la mid ah sida tababaraha uu furmo suuqa Android, laakiin gebi ahaanba waxay ku kala duwan yihiin midba midka kale. Tababaraha daaqadaha Android loola jeedaa software ah lagu rakibay kombuyuutar Windows ah si ay u maareeyaan telefoonka aad Android oo kiniin ah. Si kastaba ha ahaatee, tababaraha suuqa kala Android waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu maareeyo daaqadaha, beddelaan daaqadaha telefoonka aad Android oo kiniin ah.
Waa maxay xiriirka ka?
Kala duwan sida ay yihiin, ay leeyihiin xiriir iyaga betwen, in uu yahay, qaar ka mid ah maamulayaasha daaqadaha Android maamuli karaan barnaamijyadooda Tababaraha suuqa kala Android ka kombiyuutarka. Wondershare MobileGo for Android , MoboRobo , Mobogenie iyo ka badan yihiin kuwa midigta.
Qeybta 4: Maareeyaha Desktop Android Windows in Maamul Manager Window App u Android
Sida aan kor ku xusin, daaqadaha badan Android Tababaraha yihiin avilable si loo caawiyo maaraynta barnaamijyadooda Tababaraha suuqa kala ah ee Android. Halkan, waxaan inta badan diirada saaraan kuu sheegaysa cabsi badan hal - Wondershare MobileGo for Android.
An dhan-in-hal Manager Android Windows si loo caawiyo maaraynta dhan Tababaraha suuqa kala Android apps- kaliya neecaw.
Kaabta iyo soo celinta Tababaraha suuqa kala Android iyo xogta la 1 click.
Download barnaamijyadooda Tababaraha suuqa kala Android ka app dukaanka dhisay-in Google Play.
Dejinta iyo rakib barnaamijyadooda Tababaraha suuqa kala ah ee Android ku yaalla.
Dhoofinta widnow tababare u app Android ka qalab Android si aad u computer, ama in ka badan in ay kaarka SD.
Sax barnaamijyadooda la rabin oo wada uninstall mar.
La wadaag aad jeceshahay barnaamijyadooda Tababaraha suuqa kala Android la SMS, Facebook iyo Twitter saaxiibo aad.
100% la jaan Samsung, HTC, LG, Google, Motorola, Sony, Huawei, iwm
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri dowloading ama la wadaago barnaamijyadooda, ama u guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD.
Download, rakib, daaqadaha dhoofinta, uninstall, Share Android Tababaraha .Hawlwadeennada ka Computer
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Tababaraha Windows ee software Android - Wondershare MobileGo for Android on your computer.
Tallaabada 2. Isku telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka la cable USB ah ama ka weyn WiFi.
Tallaabada 3. In uu furmo suuqa hoose, u tag geeska bidixda ah ee kore oo guji Google Play Apps . Raadi barnaamijyadooda Tababaraha suuqa kala Android sida aad doonayso inaad guji rakib si ay u soo bixi. Chine ayaa waxaa si toos ah rakibi doonaa si aad Android ama kiniin.
Tallaabada 4. Tag column ka tegey oo guji Apps inuu soo galo suuqa kala maamulka app.
Tallaabada 5. Start si ay u maareeyaan barnaamijyadooda Tababaraha suuqa kala Android adigoo gujinaya rakibi, uninstall, dhoofinta, dhaqaaq SD Card ama share icon ah.
1 Click to kaabta & Soo Celinta Android Phone
Xiriirada kaabta on Android Phone Si fudud
Xiriirada Transfer in Phone kale
Talooyin aad ka ogaato ku saabsan Apple Music vs. Spotify Music vs. Google Play Music
> Resource > Android > Top Manager Window Android 5: Multi-Window waxaa suurtagal ah